အကောင်းဆုံးရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များနှင့်ရုပ်ရှင် SUSSEX အဓိပတိ SANJEEV BHASKAR ၏စာရင်းဖြစ်သည် - သတင်း
အကောင်းဆုံးရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များနှင့်ရုပ်ရှင် Sussex အဓိပတိ Sanjeev Bhaskar ၏စာရင်းဖြစ်သည်
လူရွှင်တော်၊ သရုပ်ဆောင်၊ တီဗွီတင်ဆက်သူနှင့် Sussex တက္ကသိုလ်၏အဓိပတိ - ဤသူသည်အရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းပြီးချိန်၌လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းအပြင်သင်၏တီဗွီဖန်သားပြင်တွင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်သူ့ကိုသင်တွေ့ကောင်းတွေ့ဖူးလိမ့်မည်။
သူဟာဘီဘီစီရဲ့စီးရီးဖြစ်တဲ့ Goodness Gracious Me ဆိုတဲ့နံပါတ် ၄၂ မှာရှိတဲ့ The Kumars ဇာတ်ကားနဲ့သူ့ရဲ့မကြာသေးမီက Unforgotten အပေါ် ဦး ဆောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတစ် ဦး အဖြစ်သူ့ရဲ့အခန်းကဏ္onကိုသူသိပြီးသူရဲ့အကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုလူသိများပါတယ်။
Sanjeev သည် Hatfield Polytechnic (ယခု Hertfordshire တက္ကသိုလ်ဟုလူသိများ) မှဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး IBM ကွန်ပျူတာ၌ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အလုပ်ရခဲ့သည်။ သူနှင့်သူမသူငယ်ချင်း Nitin Sawhney တို့ ပူးပေါင်း၍ The Secret Asians ကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုနောက်ပိုင်းတွင် Goodness Gracious Me အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
နံပါတ် ၄၄ ရှိ Kumar များ
၂၀၀၁ - ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ။ Sanjeev သည်စီးရီး ၇ ခုတွင်နံပါတ် ၄၂ တွင်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၂ နှင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းများနှင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Peabody ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါပြပွဲသည်စိတ်ကူးယဉ်ဗြိတိသျှအိန္ဒိယမိသားစုအကြောင်းဖြစ်သည်။ Sanjeev သည်အရွယ်ရောက်သူ Madhuri နှင့် Ashwin Kumar တို့၏အမည်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ပြပွဲမှာတော့ Sanjeev ရဲ့အိပ်မက်ဟာတီဗီတင်ဆက်သူဖြစ်လာပြီးသူတို့ရဲ့နောက်ဘက်ဥယျာဉ်ထဲမှာတီဗီစတူဒီယိုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယနှင့်ဗြိတိသျှတို့၏ယဉ်ကျေးမှုများကိုကာယကံရှင်များ၊
Sanjeev Bhaskar နှင့်အတူအိန္ဒိယ
၂၀၀၇ တွင် Sanjeev တွင်ဘီဘီစီနှင့် ၄ င်း၏မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို Sanjeev Bhaskar နှင့်အတူအိန္ဒိယအမည်ရှိသောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ စီးရီးဖြစ်ပါတယ် ရရှိနိုင် BBC iPlayer အကြောင်း
တီဗွီနှင့်ရုပ်ရှင်များသာမက Sussex အဓိပတိ Sanjeev Bhaskar သည်စင်မြင့်ပေါ်မှကြယ်တစ်ပွင့်လည်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ Spamalot တွင် King Arthur ပါဝင်ခဲ့သည်။ Spamalot သည် King Arthur နှင့်သူ၏ Knights တို့၏ဇာတ်လမ်းကို Monty Python နှင့် the Holy Grail မှပြန်လည်ထုတ်လွှင့်သောဂီတဟာသဖြစ်သည်။
Sanjeev Bhaskar သည် The Doctor of Periodic ဟာသဒရာမာတွင် Dr. Prem Sharma ပါဝင်သည်။ ဒေသခံဆရာဝန်သေဆုံးပြီးနောက်တောင်ပိုင်းဝေလနယ်သတ္တုတူးဖော်ရေး (Trefelin) ရွာတွင်သူအလုပ်ရနေသည်နှင့်အမျှစီးရီးမှာဆက်တိုက်ဖြစ်သည်။ ဒီစီးရီးကို ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကစတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀-၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစပြီးစီးရီးသုံးစီးထွက်ရှိခဲ့သည်။
Sanjeev တွင်နောက်ထပ်သရုပ်ဆောင်ထားသောနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်မှာ Absolutely Anything (၂၀၁၅) တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ သူသည် Ray နှင့်ကျောင်းဆရာ Neil ၏ဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည်။ သူသည်ဂြိုလ်သားများကအကန့်အသတ်မဲ့ပါဝါပေးထားသည်။ သူဆန္ဒရှိသောတစ်ခုမှာဆရာမ Miss Pringle (Emma Pierson) သည်သူမနှစ်သက်သော Ray အားကိုးကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများစွာသာမက Bhaskar သည်လည်း Paddington2အပါအ ၀ င်ရုပ်ရှင်အတော်များများတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Jarfi သည်ကာတွန်းဟာသရုပ်ရှင်၌ပါဝင်သည်။
Sanjeev သည်သောမတ်စ်ရှိ Shankar ၏နောက်ကွယ်နှင့် Tank Engine ဖြစ်သည်။ သူသည်စီးရီး ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄ နှင့် Big World တွင်ပါလာသည်။ Big Adventures! အထူး။
ကိုယ့် adderall တရားဝင်ဘယ်မှာဝယ်နိုင်
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Sanjeev နှင့်သူ၏ဇနီး Meera Syal တို့သည် Jack Malik ၏မိဘများဖြစ်သော Jed နှင့် Shelia Malik တို့သရုပ်ဆောင်ခဲ့သောမနေ့ကရုပ်ရှင်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည်သူ၏ Beatles သီချင်းများအားသူပိုင်ဆိုင်သောအတိုင်းနာမည်ကျော်ကြားရန်ဂျက်မာလစ်၏မြင့်တက်မှုနောက်သို့လိုက်သောရင်ခုန်စရာဟာသတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည် Ed Sheeran ၏သရုပ်ဆောင်ဖြစ်သည်။
Sanjeev နှင့် Meera တို့သည် Premiere ၌တည်ရှိသည်
Sanjeev ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသောဗြိတိသျှဟာသဇာတ်ကား Sandylands သည်ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့ Sandylands ရှိ Offbeat ဇာတ်ကောင်များ၏ဘဝကိုလိုက်သည်။ Sanjeev သည်ဖျော်ဖြေရေး arcade ပိုင် Les Vegas နှင့်အဓိကဇာတ်ကောင် Emily Verma (Natalie Dew) ၏မထင်မှတ်သောဖခင်ဖြစ်သည်။ သူမဖခင်၏ဈာပနအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ရန် Sandylands သို့ပြန်လာစဉ်အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်ရှိ Emily သည်သူမအနေဖြင့်အာမခံပိုက်ဆံဖြင့်သူသေဆုံးခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒုတိယစီးရီးသည်ယခုနှစ်တွင်လေထုကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်တွင် Sanjeev ကိုသင်မတွေ့ရသေးပါက Netflix တွင်မေ့မရသောစီးရီးတွင် Detective Sunil 'Sunny' Khan ကစားနေသည်ကိုသင်တွေ့ရပေမည်။ မူလက ITV ကို ၂၀၁၅ တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး၊ စီးရီးများသည်အားကောင်းနေဆဲဖြစ်ပြီး Netflix တွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ ဒီအစီအစဉ်တွင် London Detectives နှစ်ခုဖြစ်သော DCI Cassie Stuart နှင့် DI Sunny Khan တို့ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းတို့ကိုရာဇ ၀ တ်မှုများဖြေရှင်းသည့်အနေဖြင့်လိုက်နာသည်။ စီးရီးတစ်ခုစီသည်အမှုအသစ်တခုကိုကိုင်တွယ်ပြီးခေါင်းမဲ့အလောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်လူသတ်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်။
ဤသည်မှာ Sanjeev တွင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့်တီဗီရှိုးအားလုံး၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ်အားလုံး၏အလွန်သေးငယ်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်နောက်တစ်ကြိမ်တီဗွီကိုကြည့်နေစဉ်သင်သည်ယခုသူ့ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးကျွန်ုပ်၏အဓိပတိဖြစ်သည်ဟုပြောနိုင်လိမ့်မည်!
• Sussex ရဲ့အဓိပတိ Sanjeev အကြောင်းကိုသင်မသိသောအရာ (၇) ခု
• ၂၀၂၀ ခုနှစ် Sussex အတန်းအစား - သူတို့၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးဘွဲ့များကိုကြည့်ပါ
Brighton နှင့်အနီးတဝိုက်တွင်ရှိသည့် Netflix စီးရီးအသစ်
ဒါကြောင့်သင်ကယဉ်ကျေးမှုသင့်လျော်သောကြောင့်, သင်တော့ဘူး hoops ဝတ်ဆင်လို့မရပါဘူး
Love Island Gossip Column: ကျွန်းသူကျွန်းသားတစ် ဦး က n-word ကိုပြောခဲ့သည်လား?! လျှို့ဝှက်ကုဒ်ပါသောစကားလုံးများကဖော်ပြသည်
ဒီဟာက Tiger King Zookeepers တွေအတွက်ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိသလဲ
'Swiper's Fatigue' ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း - ချိန်းတွေ့ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းများကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည်
'Friends Forever' တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် tampons များသည်သင်၏အချိန်ကာလကိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်မျှဝေခွင့်ပြုသည်
JE SUIS ANKARA: Hennessy သည်အနောက်တိုင်းအရေခြုံမှုကိုကိုင်တွယ်ရန် Facebook filter အတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုစတင်ခဲ့သည်
ယခုနှစ် Safer Sex Ball မှအများဆုံးဒေါသထွက်ဖွယ်ဓာတ်ပုံများ
ပြန်လည်သုံးသပ်: R + J ကို: Prokofiev ရဲ့ Romeo နှင့် Juliet ၏အသစ်သောအနက်